Guddoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cabdala Cawad ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey, – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Guddoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cabdala Cawad ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey,
Guddoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cabdala Cawad ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey, kaasoo uu ku shaaciyay in 31 bishan uu qabsoomi doono kulanka lagu horkeenayo Mooshinka ka yaalla Guddoomiye Jawaari.
Mahad Cawad ayaa sheegay in go’aankaas aanu aheyn mid ka soo baxay Guddoonka iyo xafiiskiisa, isagoo soo qaatay qodobo sharciyeed qeexaya Dastuurka iyo xeer hoosaadka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Guddoomiye Muudey aanu Kusime aheyn, maadaama Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu joogo, mas’uuliyadiisana aanu wali weyn, xitaa waxaa uu xusay in Guddoomiyaha Golaha Shacabka aanu Kusime Madaxweyne aheyn.
Qoraalka ka soo baxay Guddoomiye Mahad Cawad ayaa cirka sii gelinaya khilaafka Golaha Shacabka iyo hoggaankiisa ee ka dhashay mooshinkii laga keenay Guddoomiye Jawaari.
Previous Ra’iisal wasaariihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo ku sugan magaalada Dubai, ayaa ka hadaly xiisada siyaasadeed ee ka oogan Golaha Shacabka iyo mooshinka laga keenay guddoomiye Jawaari.
Next Wasiirka Dakadaha Somaliya oo sheegtay sharcigii DP World dalka looga mamnuucay inuu horyaalo saxiixo Madaxweynaha